A na-ere ahịa akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ nke ọrụ na mgbakwunye na ihe ndị ọzọ sitere na ụlọ ọrụ NeXT | Esi m mac
A na-ere ahịa akpụkpọ ụkwụ ọrụ na mgbakwunye na ihe ndị ọzọ sitere na ụlọ ọrụ NeXT
Mkpọmkpọ nke mmadụ dị iche iche na-erekarị, ebe ha na-eri oge na-adabere n'onye nwe ya. Nke a bụ ikpe banyere auction na O mere na Satọdee gara aga nakwa na ọ dị maka ire ere ihe dị iche iche nke onye nwe ụlọ ọrụ Apple Steve Jobs nwere.
Ihe ndị a bụ akụkụ nke nchịkọta Sheffield, nke Mark Scheff, a siri ike nri siri nri onye na-manager nke Ọrụ 'ugbo emi odude ke Albany, California n'oge 80s.
Dabere na onye isi nri a, Steve Jobs na-achọ ndị ọrụ ga-enyere ya aka. Anyị na-eto ahịhịa ndụ na nri sitere n'okike iji nwalee na kichin. Edere m ihe ndị ahụ mgbe Ọrụ achọghịzị ha, ụfọdụ ka edobela ma nye ndị ọzọ ndị enyi na ndị nọ nso Ọrụ, yabụ nchịkọta nke ihe ndị ana-azụ ahịa bụ nke pụrụ iche ma dịkwa iche.
Na mkpokọta ihe maka okushon gụnyere:
Otu ụzọ eji akpụkpọ ụkwụ Akara ngwa ngwa
una akwa olu sweatshirt site na NeXT
Un seiko elekere eji
N'ikpeazụ, otu obere ihe anọ dị obere, gụnyere kaadị azụmahịa Steve Jobs nke ọ na-azụbu, kaadị ọzọ NeXT, mkpịsị mkpịsị odeakwụkwọ Apple 80, na kaadị mbupu.
A na-erere ihe niile ọnụahịa $ 850 onye nke ọ bụla, ya bụ, otu isiokwu niile nwere mmalite mmalite nke $ 3.400.
Ekwesiri ighota na Scheff nyeburu kaadi ahia ato na ulo akwukwo Marin nke rere emesịa $ 10.500.
Ọ bụ ezie na ha nwere ụfọdụ uru maka ụfọdụ ndị nchịkọta, m n'onwe m na-ahọrọ ngwaọrụ ndị amịpụtara nke ọgụgụ isi nke ahịa na ụlọ ọrụ dị ka Apple I na nke anyị na-ekwu okwu n'isiokwu ọzọ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » A na-ere ahịa akpụkpọ ụkwụ ọrụ na mgbakwunye na ihe ndị ọzọ sitere na ụlọ ọrụ NeXT
Ndị San Bernardino metụtara, tinyere ndị FBI na ndị Apple
Intel na-aga nzọụkwụ ọzọ na nchekwa ma gosipụta ya Ezi Key paswọọdụ njikwa